Sheekada filimka MCA (Middle Class Abbayi): Nani waa atoore qabsaday Tollywood | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka MCA (Middle Class Abbayi): Nani waa atoore qabsaday Tollywood
Sheekada filimka MCA (Middle Class Abbayi): Nani waa atoore qabsaday Tollywood
Taariikhda: December 26, 2017
Natural Star Nani oo magaciisa dhameestiran yahay (Naveen Ghanta) waxaa haatan tiyaatarada u saaran filimka la wada jecleestay MCA (Middle Class Abbayi) waxayna shabakada Filimside idiin soo diyaarisay sheekada filimkaan iyo waxa laga dhahay.
Jilaayaasha: Nani, Sai Pallavi, Bhumika Chawla, Vijay Varma iyo Rajeev Kanakala
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 23-daqiiqo
Fariinta Filimka MCA: Nani (Nani) iyo walaalkiis Rajeev (Rajeev Kanakala) nolol farxad leh ayaa ka dhaxeyso waxayna dagan yihiin tuulada Medak, laakiin Nani wuxuu dareemayaa carro iyo daryeel xumo marka walaalkiis uu guursado Jyothi (Bhumika Chawla).
Sidaa darteed Nani naceebka uu dumaashadiisa u qaado awgeed deegaanka wuu isaga tagaa wuxuuna nolol ka bilaabaa magaalada Hyderabad asigoo halkaas abtigiis kula noolaanayo.
Sanado kadib Nani tuuladiisa ayuu dib ugu laabanaa marka uu walaalkiis dib ugu yeerayo si uu caawinaad ugu fidiyo, markaan Nani walaalkiis iyo dumaashadiis Delhi ayay ku nool yihiin shaqo fiicana wey heestaan.
Laakiin Nani dumaashadiis Jyothi (Bhumika Chawla) waa sarkaal qaabilsan ilaalinta iyo ganaaxa gaadiidka xamuulka iyo rakaabka shacabka qaadaan qaladaadka ay galaan hadii ay xawaare xad dhaaf ah ku socdaan, ama meel qaldan la dhigo ama xad gudub kale ay sameeyaan.
Jyothi (Bhumika Chawla) waxaa loo badalaa magaalada Warangal si ay wax kaga qabato tuuga weyn Siva (Vijay Varma) oo basas sharci daro ah iska leh magaaladana laga dambeeyo marka ay fara gashato arinkaan wuxuu ugu hanjabaa inuu 10-maalmood gudaheeda ku dili doono.
Nani wuxuu go’aan ku gaaraa inuu dumaashadiisa garab istaago kana dhiciyo tuuga weyn ee aan loo dhawaan karin xili uu og yahay halista soo wajihi karto.
Qiimeynta Filimka MCA: sheeko ahaan waa mid dhex dhexaad ah oo la siiyay 3/5 qiimeyn ahaan sidoo kalena Director Venu Sri Ram ayaa ka dhigay filimka MCA mid aan laga xiiso dhigeyn qaabka uu fariintiisa isugu daba riday.
Bandhiga Jilaayaasha: Nani wuu ku raaxeestaan aflaantaan oo kale marka hore inuu yahay wiil xaafadaha iska joogo kadibna isku badalaayo qof karti badan oo qoyskiisa sharafkooda wax walbo kala weyn yihiin, wuxuu yaqaan Nani si daawadayaasha loo mada daalo markalena MCA wuxuu kusoo bandhigay inuu yahay atoore aan iin loo yeeli karin.
Bhumika Chawla ayaa filimka MCA door adag ka qaadatay waana hubaal in taageerayaasheeda atirishadan ruug cadaaga ku raaxeesan doonaan bandhigeeda filimkaan.
Vijay Varma laadarka mayalka adag filimka MCA isagans si heer sare ah ayuu kaga baxsaday halka Sai Pallavi atiriahada filimkaan doorkeeda xanaaqa badan uu wacan yahay sidoo kalena Rajeev Kanakala isagana door xiiso badan ayaa la siiyay.
Gunaanad: MCA waa filim shactiro iyo jaceyl ku bilaabanayo kadibna isku badalaayo wajiga aflaanta Telugu lagu yaqaan oo ah Action, aar gudasho iyo xifaaltan badan.
Sidaa darteed MCA halka saac ee hore waa mid si heer sare ah loo diyaariyay laakiin halka saac dambe xoogaa meelaha qaar caajis ayaa ka muuqdo waxaana wanaagsaneyd in la adkeeyo fariin ahaan.
Markaan Nani filimkiisa MCA uma fariin adko sida aflaantiisii ugu dambeeyay ee Big Hits noqdeen sida Nenu Local iyo Ninnu Kori laakiin waa hubaal in MCA noqon doono mashruuc guuleestay oo ay sii socon doonto Nan guulihiisa xariirka ah ee laga yaaban yahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka MCA:
Waxaa Aqrisay 771